Acrylic AmaSpredishithi, Acrylic Mirror Ishidi, Plastic Mirror Ishidi - Donghua
I-DHUA yasungulwa ngo-2000 ukuhlinzeka ngeshidi eliphezulu le-acrylic, ishidi lesibuko le-acrylic kanye namashidi wesibuko sepulasitiki ahlukahlukene.
Ngaso sonke isikhathi yenza imikhiqizo esezingeni eliphakeme
I-anti-fog coating isetshenziswa esibukweni se-Dhua esezingeni eliphakeme se-polycarbonate egumbini elihlanzekile le-Class 10. Isibuko se-Anti-Fog senzelwe ukumelana nenkungu ngaphansi kwezimo ezinzima kakhulu. Ngokuvamile kusetshenziswa izibuko zokushefa / zeshawa, izibuko zamazinyo, ne-sauna, izicelo zeklabhu yezempilo. Igama lomkhiqizo I-Anti-fog Mirror, i-Fogless Mirror, i-Fog Free Mirrors Izinto ze-Polycarbonate (i-PC) Umbala ocacile weSayizi we-Sheet 915 * 1830mm, ukusika ngokwezifiso ukusayizi ubukhulu 1.0 - 6.0 mm Masking Polyfilm MOQ 50 amashidi ...
Isibuko seConvex Safety and Security, Isibuko Somgwaqo Esibheke Emgwaqweni Esibukweni Isibuko esiyindilinga siyindawo eyindilinga ekhombisa (noma noma iyiphi indawo ekhanyayo eyenziwe yaba yingxenye yomkhakha othile) lapho uhlangothi lwayo oluqhakazile lubhekene nomthombo wokukhanya. Kubonisa isithombe se-engeli ebanzi ngosayizi owehlisiwe ukunweba inkambu yokubuka ukusiza ukukhulisa ukubonakala ezindaweni ezahlukahlukene zokuphepha noma ezisebenzayo zokubheka nokuqapha izicelo. I-DHUA ihlinzeka ngezibuko ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezinikezela kakhulu ...
Ukuzuza ekubeni engasindi, umthelela, ukumelana nokubhidlika, okungabizi kakhulu futhi okuhlala isikhathi eside kunengilazi, amashidi wethu wesibuko we-acrylic angasetshenziswa njengenye indlela kunezibuko zengilazi zendabuko yezicelo eziningi nezimboni. Njengawo wonke ama-acrylics, amashidi wethu wesibuko we-acrylic angasikwa kalula, aboshwe, akhiwe futhi aqoshwe laser. Amashidi wethu wesibuko eza ngemibala ehlukahlukene, ubukhulu nobukhulu, futhi sinikeza izinketho zesibuko esisikiwe. Igama lomkhiqizo Sula i-acrylic plexiglass mirror ...
Sula i-Plexiglass Acrylic Sheet, i-Transparent Plastic Sheet Acrylic, eyaziwa nangokuthi i-Plexiglass, i-thermoplastics futhi ivame ukunikezwa ngamashidi njengenye indlela engasindi noma engavikeleki engilazini. Ama-Acrylic Sheets acacile akhombisa izimfanelo ezifana nengilazi — ukucaca, ubukhazikhazi, nokwenza izinto obala — kepha ngesigamu sesisindo futhi izikhathi eziningi ukumelana nomthelela kwengilazi. Kulula ukwenza, ukubopha kahle ngama-adhesives nama-solvents, futhi kulula ukwenza i-thermoform ngaphandle kokulahleka kokucaca okubonakalayo. I-Donghua ikakhulukazi ...
Amashidi Ama-Mirror Ama-Acrylic Amabala, Umbala Okhanyisiwe We-Acrylic Plexiglass Sheet Ukuzuza ekubeni engasindi, umthelela, ukumelana nokuchoboza, okungabizi kakhulu futhi okuhlala isikhathi eside kunengilazi, amashidi wethu wesibuko we-acrylic angasetshenziswa njengenye indlela kunezibuko zengilazi zendabuko yezicelo eziningi nezimboni. Njengawo wonke ama-acrylics, amashidi wethu wesibuko we-acrylic angasikwa kalula, aboshwe, akhiwe futhi aqoshwe laser. Izibuko zethu zamashidi ziza ngemibala ehlukahlukene, ubukhulu nobukhulu, futhi sinikeza ukusika -...
I-High Gloss PETG Mirror Sheet, i-PETG Plastic Mirror Sheet ishidi lesibuko se-PETG liyiphepha leplastiki eliguquguqukayo elijwayele ukusetshenziswa kakhulu kwezobunjiniyela, izimonyo, iziqukathi zokugcina, nokuningi njengoba kusetshenziselwa i-thermoformed kalula futhi kusikwa ukudala ubujamo obuyinkimbinkimbi ngemininingwane eqondile. Isibuko se-PETG sinikeza izinzuzo ezahlukahlukene ezivela ekucaceni okuphezulu, ukugcinwa kwe-gloss surface, ukungabi mhlophe kwengcindezi, ukwamukela uyinki nopende, futhi kuvunyelwe i-FDA yokuxhumana nokudla. Ishidi le-PETG Mirror linikeza ubumbela obuhlukahlukene ...
I-Polycarbonate Mirror, i-PC Mirror, i-Mirrored Polycarbonate Sheet Njengoba yaziwa kahle, isibuko se-polycarbonate yi-substrate emelana nomthelela kakhulu. Isibuko sethu se-polycarbonate (PC) siyisinqumo esihle uma udinga indawo enesibuko enokumelana nokushisa okuphezulu namandla omthelela. Ezinye izinzuzo zesibuko sethu se-polycarbonate ngamandla omthelela omkhulu, ukuqina, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukucaca kwe-crystal nokuqina kobukhulu. Sine-0.25 ~ 6 mm ubukhulu, 915 * 1830 mm size, umbala wesiliva ocacile etholakala ...
Isitika se-Mirror Wall, Izitikha ze-Acrylic Mirror Ezisuswayo I-DIY Wall Decor Mirror Isibuko Esingeyona Ingilazi Segumbi Lokuhlala Ekhaya Igumbi Lokuhlobisa Igumbi lokuhlobisa elihle lesibuko sekhaya lakho noma lehhovisi lizonikeza ikamelo lakho ukubukeka okuqabulayo, lenze isimo esihle futhi linikeze ukuthinta okumangazayo ingaphakathi. Isidikha sodonga lwesibuko se-Dhua senziwe nge-plastic acrylic, ubuso buyakhombisa futhi ingemuva line-glue uqobo; Kukhona ifilimu evikelayo ebusweni besibuko ukuvimbela isibuko ...
Sicela ushiye umyalezo kithi futhi sizothintana kungakapheli amahora angama-24.
I-Thermoplastics iyindlela enhle kakhulu yokubonisa kanye nokwenza izinto ezintsha. Ukukhethwa kwethu kwekhwalithi yekhwalithi ephezulu, ehlukahlukene ye-acrylic nemikhiqizo yesibuko sepulasitiki kusiza abaklami ukuthi benze imibono yabo yokudala iphile. Sinikezela ngemibala ehlukahlukene, ubukhulu, amaphethini, osayizi beshidi nokwakhiwa kwe-polymer ukuhlangabezana nezidingo zobuciko obuningi nezinhlelo zokusebenza zokuklama. Sinikeza ukukhethwa okukhulu kwemiklamo ye-acrylic nokukhiqizwa kwabathengisi & amabhizinisi nokuhlobisa ikhaya ngobuningi be ...
Imininingwane Yomkhiqizo Ama-Acrylic angama-polymers we-methyl methacrylate (PMMA), enezindawo eziningi ezilusizo ekubonisweni emibonisweni yezohwebo noma ekubonisweni kwephuzu lokuthenga. Zicacile, zilula, zilukhuni futhi ziyamelana nomthelela, zingenziwa ngezifiso, kulula ukuzenza futhi zihlanzeke kalula. Amathuba ngama-acrylics ahamba ngaphezu kokuboniswa kombukiso wokuhweba. Ama-Acrylic ayinketho ethandwayo yezinye izinto zokuthengisa ezinjengamamanequins, ukuboniswa kwamawindi, ama-rack noma amashalofu abekwe odongeni, izibonisi ezijikelezayo zetafula nezimpawu ...
Imininingwane Yomkhiqizo I-Acrylic izuze ngokuthandwa ngaphezu kwengilazi yokwakheka eminyakeni yamuva ngesizathu esizwakalayo. ● Iyabhidlika futhi ayisindi, ngokungafani nengilazi. Lesi sici senza i-acrylic ikhetheke kubathwebuli bezithombe abasebenza nezingane nemindeni - ikakhulukazi izingane. Ukulengisa ifreyimu ngephaneli le-acrylic enkulisa noma egumbini lokudlala kuphephe kakhulu kunokunye okuhlukile kwengilazi, ngoba mancane amathuba okuthi kulimaze noma ngubani uma iwa. ● Ukwengeza, i-shatterproof ne-lightweigh ...
Imininingwane Yomkhiqizo Izinto ezisetshenziswa kakhulu ekukhanyiseni izinhlelo ziyi-acrylic ne-polycarbonate. Ama-plexiglass e-Acrylic namashidi e-polycarbonate womabili amashidi epulasitiki aqinile futhi aqinile anamathuba okubuka phezulu. I-DHUA ikakhulukazi inikezela ngamashidi e-acrylic wohlelo lwakho lokukhanyisa. Ibanga lethu le-acrylic elibonakalayo lisetshenziselwa ukwenza i-Light Guide Panel (LGP). I-LGP iyi-panel ye-acrylic esobala eyenziwe nge-100% ye-Virgin PMMA. Umthombo wokukhanya ufakiwe onqenqemeni lwawo. Kwenza i ...
I-Acrylic ingenye yezinto ezivame kakhulu ukusetshenziselwa ukwenza ukuvezwa kwe-POP, ikakhulukazi ezimbonini ezinjengezimonyo, imfashini nobuchwepheshe obuphezulu. Umlingo we-acrylic ocacile ulele ekhonweni lawo lokunikeza ikhasimende ukubonakala okuphelele komkhiqizo othengiswayo. Kuyinto elula ukusebenzisana nayo ngoba ingabunjwa, isikwe, ifakwe umbala, yakhiwe futhi inanyathiselwe. Futhi ngenxa yobuso bayo obushelelezi, i-acrylic yinto enhle ongayisebenzisa ngokunyathelisa okuqondile. Futhi Uzokwazi ukugcina izibonisi zakho ze-y ...
Izinto ezisayinisa izimpawu ezivela ku-DHUA zihlanganisa amabhodi okukhangisa, amabhodi wamaphuzu, izimpawu zezitolo ezidayisa ezitolo kanye nezikhangiso zokukhangisa eziteshini zezokuthutha. Imikhiqizo ejwayelekile ifaka izimpawu ezingewona ugesi, amabhodi ezikhangiso edijithali, izikrini zamavidiyo nezimpawu ze-neon. I-Dhua ikakhulu inikela ngezinto ze-acrylic ezitholakala ngokujwayelekile, namashidi wokusika nosayizi nokwenziwa ngokwezifiso kohlelo lokusebenza lwezimpawu. Izimpawu ze-acrylic ishidi lepulasitiki elinesiphetho esicwebezelayo. Iza ngemibala eminingi ehlukahlukene kufaka phakathi iqhwa futhi icacile. Lolu hlobo lwezimpawu l ...
I-DHUA ikhiqiza izibuko ze-convex zokuphepha nokuphepha, izibuko eziyimpumputhe nezibuko zokuhlola ezenziwe ngekhwalithi yesibuko se-acrylic esiyisisindo esincane, sichitha ukumelana nokucaca okuhle kakhulu. Izibuko ze-DHUA ezibukekayo zisetshenziselwa ukudayisa, ukugcina impahla, isibhedlela, izindawo zomphakathi, ukulayisha amachweba, izinqolobane, amadokodo okuqapha, izindawo zokukhiqiza, amagaraji okupaka kanye nomgwaqo osuka emigwaqeni nasezimpambanweni zomgwaqo. Izinzuzo zokusebenzisa isibuko esihlanganayo ukuphepha nokuphepha zibhalwe ngezansi: Esilula, ...
Hlobo luni lwezibuko zepulasitiki ezingafaka ezinye izibuko zengilazi ngaphandle kokumosheka esimweni sezindawo ezinkulu?
Hlobo luni lwezibuko zepulasitiki ezingafaka ezinye izibuko zengilazi ngaphandle kokumosheka esimweni sezindawo ezinkulu? Okokuqala sidinga ukuqonda izici eziyisisekelo zalezi zinto: 1. Isibuko se-Acrylic (i-Acrylic, i-Plexiglass, i-PMMA, i-Polymethyl Methacrylate) Inzuzo: ukwenza izinto obala okukhulu, ukumbozwa kwesibuko ...
Imakethe Ye-Plexiglass Iyakhula
IMakethe Ye-Plexiglass Iyakhula I-Plexiglass iyinto eshisayo ngokuzumayo, njengoba isidingo sokuqedwa nokuvikelwa komphakathi sikhuphukile. Lokho kusho ukuphakama okukhulu ebhizinisini lomhlinzeki we-acrylic plexiglass. Ukushesha kwezingcingo kuqale maphakathi noMashi. Njengoba ubhadane lwe-coronavirus lushanela ngokushesha ...
Ungalifaka Kanjani Ishidi Le-Mirror ye-Acrylic
Ungalifaka kanjani ishidi le-Mirror ye-Acrylic Ishidi lesibuko le-Acrylic lenza ukungezwa okusebenzayo nokuhle ezindongeni, eminyango, ezindleleni zokungena nokuningi, engeza ukuthinta kwanamuhla kunoma isiphi isikhala osifaka kuso. Isibuko se-Acrylic sithandwa kakhulu njengoba sinikeza ukubukeka okuvamile ingilazi ngenkathi i ...